दाङ आईटिएफ तेक्वान्दोलाई एक स्वर्णसहित चार पदक « Farakkon
दाङ आईटिएफ तेक्वान्दोलाई एक स्वर्णसहित चार पदक
दाङ, बैशाख २६। प्रदेश नं.५ को रुपन्देहीमा भएको प्रथम प्रदेशस्तरिय मुख्यमन्त्री रनिङ शिल्ड खुल्ला प्रतियोगिता अन्तर्गत आईटिएफ तेक्वान्दोमा दाङ आईटिएफलाई एक स्वर्ण पदकसहित चार पदक जितेको छ ।
यहि बैशाख २३ गतेखि २५ गतेसम्म रुपन्देहीमा भएको प्रतियोगितामा दाङकी सरिता नेपालीले आइटिएफ तेक्वान्दोमा गोल्ड मेडल जितेकी हुन । प्रतियोगितामा ४०–४५ केजी तौल समूह अन्तर्गत पाल्पाकी खेलाडीलाई पराजित गर्दै स्वर्ण पदक जितेकी हुन । स्वर्ण पदक जितेकी नेपालीले प्रमाणपत्र, मेडल र नगद पुरस्कार प्राप्त गरेकी हुन ।
त्यस्तै प्रतियोगितामा ४५–५० तौल समूहमा महिलातर्फ अश्मी पुन तेश्रो स्थान प्राप्त गरिन । ४५–५० तौल समूह अन्तर्गत डिल्लीराज बस्नेत र ५०–५५ तौल समूह अन्तर्गत दाङकै खेलाडी पवन वली तेश्रो स्थान हुन सफल भएको प्रशिक्षक भिम बहादुर थापाले जानकारी दिए । प्रतियोगिताका बिजयी खेलाडीहरुले प्रमाणपत्र, मेडल र नगर प्राप्त गरेका थिए । प्रतियोगिताका बिजयी खेलाडीहरुलाई प्रदेश नं. ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले पुरस्कार प्रदान गरेका थिए ।
प्रतियोगितामा प्रदेश नं. ५ का १२ जिल्लाका ४८ खेलाडीहरुको सहभागिता रहेको थियो । प्रतियोगितामा प्रत्येक जिल्लावाट २ जना पुरुष र २ जना महिला गरि चार जना खेलाडीहरुको सहभागिता रहेको थियो । त्यस्तै दाङवाट कोचका रुपमा भिमबहादुर थापा र व्यवस्थापकमा दाङ आईटिएफका अध्यक्ष समेत रहेका प्रेम बुढा रहेका थिए ।
त्यस्तै प्रतियोगिताका ६ वटा खेलमा ३ स्वर्ण, ८ कास्यसहित दाङले दोश्रो स्थान प्राप्त गरेको छ । प्रतियोगिताको २३ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले उद्घाटन गरेका थिए ।